jeudi, 20 juin 2019 15:46
Diplomasia: Handao an'i Madagasikara i Véronique VOULAND-ANEINI, ambasadaoron'i Frantsa
Nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny masoivoho frantsay Ambatomena omaly alarobia 19 jona i Ramatoa Véronique VOULAND-ANEINI, ambasadaoron'i Frantsa.
Alohan'ny andaozany an'i Madagasikara, ka hiazo an'i Amman, any Jordania, izay iandreketany asa hafa, dia nitatitra ny asa vita sy ny fifandraisan'i Madagasikara tamin'i Frantsa ity ambasadaoro ity.
Niasa nandritra ny 4 taona teto izy, ary manga ny lanitra hoy izy eo amin'ny roa tonta.
Notsiahiviny tamin'izany ny fitsidihana nataon'i Filoha Andry Rajoelina tany Frantsa farany teo, ny 28 mey - 3 jona 2019, izay fanasana nataon'ny filoha frantsay Emmanuel MACRON, izay manamarika ny dingana vaovao eo amin'ny fifandraisan'ny firenena roa tonta.
jeudi, 20 juin 2019 15:24
France: Véronique VOULAND-ANEINI, Ambassadeur de France à Madagascar va quitter la Grande Île
Mme Véronique VOULAND-ANEINI, Ambassadeur de France à Madagascar, a donné une conférence de presse mercredi 19 juin à l’Ambassade de France à Ambatomena.
A la veille de son départ pour son prochain poste, à Amman, en Jordanie, Mme VOULAND-ANEINI, Ambassadeur de France, a fait le bilan de ses quatre années à la tête de la mission diplomatique française à Madagascar.
L’Ambassadeur est également revenue sur la récente visite officielle du Président Andry RAJOELINA en France du 28 mai au 3 juin 2019 à l’invitation du Président Emmanuel MACRON, qui marque une nouvelle étape dans la relation entre les deux pays.
Ho tontosaina voalohany eto Antsirabe ny 22 sy 23 jona izao ny Tsenaben'ny Reny sy ny zaza na ny "Grande Foire des Enfants et Maman".
Ny fikambanana Away Communication no tompomarika amin'ny hetsika, izay kendreny hitohy isan-taona, raha toa ka ao Antananarivo hatrany no misy hetsika ho an'ny Reny sy ny zaza, ka ireo mpandraharaha mian-tsehatra amin'izany no entiny voalohany aty Antsirabe mba ho fanomezana fahafaham-po ny mponinan' Antsirabe.
Tafiditra amin'ny fankalazana ny Iray volan'ny ankizy ihany koa ny hetsika, satria homena sehatra be dia be ny ankizy mandritra ny hetsika.
jeudi, 20 juin 2019 14:31
Fandriampahalemana - Antananarivo: Mpanendaka mitam-piadiana sivy lahy voasambotry ny Polisy
Mitam-basy ary manendaka amin'ny faritra Faravohitra, Ankorahotra ary Ankadifotsy iny izy ireo, ka naharaisan’ny Polisy fitarainana misesisesy.
Mpanendaka iray miaraka amin'ny antsy be ihany koa no tra-tehaky ny Polisy tetsy Andohatapenaka.
Mpanao sinto-mahery miisa roa kosa no nifanena tamin'ny Polisy tetsy Analamahitsy raha vao avy nisintona finday teny an-dalambe, ka rehefa raikitra ny fanenjehana dia voasambotra avokoa. Mbola tratra teny amin’izy ireo ilay finday vao avy nangalariny.
Nampidirina am-ponja vonjimaika ao Antanimora ny sasany amin'ireo jiolahy raha lasa any Tsiafahy ny sasany. Ny iray kosa dia nalefa any amin'ny zaza maditra satria tsy ampy taona.
Hosantarina anio Alakamisy 20 Jona ny fankalazana ny Jobily faha-100 taonan'ny Fiangonana FJKM Ambohimandroso Filadelfia Antsirabe, eo Avaratsena.
Hisy fotoam-bavaka anio hariva hanombohana izany ary hitohy isan-kariva ny hetsika mandra-pahatongan'ny Alahady 23 Jona hankalazana manetriketrika ny fanokafana ny fankalazana.
Ny 20 Jona 1920 no nisokafan'ity Fiangonana ity voalohany.
Ho avy eto Madagasikara ilay vehivavy mpihira “gospel” ara-pilazantsara malaza, Maggie Blanchard. Hanao fampisehoana ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina izy amin’ny alahady tolakandro.
Tsy vaovao amin’ny mpankafy “gospel” ara-pilazantsara i Maggie Blanchard. Efa nanao fampisehoana teto izy tamin’ny 2013, ary nisy ny fiarahany an-tsehatra tamin’ny TGC (Tana Gospel Choir).
Teraka tao Port-au-Prince any Haïti i Maggie Blanchard ary mipetraka ao Québec, Canada.
Famokarana herinaratra: Nampahafantarina teto Antsirabe ny firoson’ny tetikasa SAHOFIKA
Nampahafantarina ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny Faritra Vakinankaratra sy ireo Distrika ary Kaominina voakasika ny fisian'ny tetikasa ho fanorenana toeram-pamokarana herinaratra goavana amin'ny reniranon'i Onive Vakinankaratra.
Efa ho herintaona sy tapany no nirosoana tamin'ny fanadihadiana maro samihafa amin'ny hanorenana ity fotodrafitrasa goavana ity, ary miroso hatrany izany. Voakasik’ity tetikasa ity ny faritra Vakinankaratra sy Alaotra Mangoro satria ny tohodrano dia ao amin'ny Kaominina Belanitra, Distrikan'Antanifotsy no miorina ary ny foibe fanapariahana ny herinaratra dia any Sahofika-Anosiben'Ala no hipetraka.
Hisy fanamboaran-dalana hiainga ao Antanifotsy hampifandray amin’ny faritra Alaotra-Mangoro haterak’io tetikasa io.
jeudi, 20 juin 2019 13:31
Ady amin’ny kolikoly: Nanao fanambaram-panana ny Tale jeneraly vaovaon’ny “Office de Transmissions Militaires de l’Etat”
Tonga nanatitra ny taratasy fanambaram-pananany teny amin’ny biraon’ny Bianco Ambohibao ny Tale jeneralin’ny OTME (Office de Transmissions Militaires de l’Etat), kolonely Rafaliarison Fidimalala, ny tolakandron’ny alatsinainy 17 jona 2019 teo.
Ny lalàna 2016-020 tamin’ny 22 aogositra 2016 momba ny ady amin’ny kolikoly no manery ny olom-panjakana ambony tsy maintsy manao fanambaram-pananana.
“Aide de Camp” an’i Filoha Andry Rajoelina, nandritra ny fitondrana tetezamita ity kolonely Rafaliarison Fidimalala notendrena ho Tale jeneralin’ny OTME ity.
jeudi, 20 juin 2019 13:26
Kitra – CAN 2019: Ny Barea an’i Madagasikara no ekipa antitra indrindra
Hanomboka ny zoma 21 jona izao any Egypta ny andiany faha-32, amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN 2019.
i Marc Lamti, vodilaharana amin’ny ekipan’i Tonizia, no zandriolona indrindra amin’ireo mpilalao hiatrika ity CAN 2019 ity. 18 taona sy 4 volana izao ny tovolahy. Metisy alemana i Marc Lamti, fa nisafidy ny hisalotra ny ankanjon’ny Aigles de Carthage Toniziana. Mila ravinahitra any Alemaina, milalao ao amin’ny Bayer Leverkusen izy.
i Naby-Moussa Yattara, mpiandry haraton’ny ekipam-pirenen’i Guinée, kosa no mpilalao zokiolona indrindra amin’izy ireo. 35 taona sy 5 volana ny lehilahy ary milalao ao amin’ny klioban’ny AS Excelsior, atsy La Réunion no nalaina ho isan’ireo hiaro ny voninahitr’i Guinée, izay klioba iray vondrona amin’i Madagasikara, ary hihaona voalohany amin’ny sabotsy 22 jona 2019.